Darawalkii khaaska ahaa ee Siilaanyo oo tahriibay iyo… | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
Darawalkii khaaska ahaa ee Siilaanyo oo tahriibay iyo…
Darawalkii khaaska ahaa ee Siilaanyo ayaa iskaga tahriibay, ninkani oo la yidhaa Cabdi Cabdilaahi, waxa uu galay dalka Turkiga oo uu uga sii gudbaayo dalalka Yurubta Galbeed oo lagu wado in uu qaxooti ahaan isaga dhibo.
Dhanka kalena waxa jira kooxo qurbo joog ahaa oo inbadan ku sugnaa Hargaysa to tuunbada in mudo ahba jaqaayay oo aan wax lacag ah la siinin bishani iyo tii horaba oo ilaa shalay dalka aad uga Soo dhoofaayay kuwaasi oo markii hore ahaa qurbo joog.
Wax alaale iyo wixii lacagta bilaashka ah fadhiga KU qaadanaayay ayaa dalka iskaga caraaraaya.
Dhanka kalena waxa uu Siilaanyo ka guuray madaxtooyada isaga oo u guuray aqal weyn oo u ka dhistay aqalkii dawlada ee uu deganaan jiray xiligii uu mucaaridka ahaa. Waxana lagu wadaa in uu Siilaanyo oo xilka wareejinba 10 cisho kadib uu u socdaalo dalka Imaaraadka oo u degi doono madaama uu halkaasi ka samaystay aqal u gaar ah